मुटुजन्य रोग देखि क्यान्सरसम्मको औषधि- कटुस ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
मुटुजन्य रोग देखि क्यान्सरसम्मको औषधि- कटुस !
“सानो-सानो ताउलीमा दुई कुड्की भात
बाहिरपट्टि बाक्ला काँडा घोच्ला तिम्रो हात, के हो ?”
यो गाउँखाने कथाको उत्तर हो- कटुस । कटुस खान योग्य फल लाग्ने रूख वर्गमा पर्ने वनस्पति हो । कटुस फुलेको समय वातावरण रमणीय त देखिन्छ नै सुगन्धित पनि हुने गर्दछ । अंग्रेजीमा हेजलनट, कोबनत, फिल्बर्ट नटको वैज्ञानिक नाम भने कोर्यलुस एभेलाना (Corylus avellana) हो ।
कात्तिक महिना देखि खान योग्य हुने कटुस फागुन चैत सम्म रहने गर्छ। जंगल चिसो हुने भएकाले लामो समय सम्म कटुस रहने गर्छ। उसो त कटुस भन्ने बित्तिकै मुख रसाउने गर्छ, स्वाद थाहा हुनेले मुखमा नपार्दै र्‍याल आउछ। पोषिलो खाना मध्ये पर्ने यो कटुसले भोकै मेटाउछ।
मानव श्रृष्टीको शुरुवातमा कटुसको महत्व आजको भन्दा बढी भएको प्रमाणहरु भेटिन्छ। मानव विकास र प्रवाधिको सहजताका कारण हिजोआज खाद्यान्नहरु उपलब्धता बढेको छ । यससँगै कुनै समय प्राचिन मानवको प्रमुख आहार रहेको कटुस आजभोली जङ्गलमै कुहिन थालेका छन् ।
विश्वभर विभिन्न जातको कटुस पाइन्छ । नेपालमा पाइने मध्ये मुसुरे कटुस, पातले कटुस, ढाल्ने कटुस आदि मुख्य हुन् । हिन्दु धर्मअनुसार भाइटीकाका दिन दूबो र कटुसको प्रयोग अनिवार्य मानिन्छ । दियो, कलश तथा गणेशको पूजा गरी यमराजको आह्वान गर्दै दूबोको माला र कटुस प्रयोग गरिन्छ ।
कटुस पोषणयुक्त जङ्गली फल हो । यसमा क्यालोरीको मात्रा निकै बढी हुने गर्दछ । प्रोटिन, कार्ब्स फाइबर, भिटामिन ई, भिटामिन बी-६, ओमेगा-६, ओमेगा-९, फ्याट्टी एसिड. थियामीन, म्याग्नेसियम, कपर, फोलेट, फस्फोरस, पोटाशियम लगायतका पोषक तत्वहरुले भरपुर कटुसले विश्वको अन्य देशमा लोकप्रिय मानिन्छ । सन् २०१७ मा मात्रै टर्कीमा ६ लाख ७५ हजार टन कटुस खपत भएको थियो ।
कटुसमा केकस्ता पोषक तत्वहरु रहन्छन् ?
हेजलनट्स (Hazelnuts) मात्रा प्रति 100 ग्राम
क्यालोरी (kcal) 628
पोटासियम 680 mg
सुगर 4.3 g
कटुस खानुको फाइदाहरु:
१. कटुस हृदयजन्य रोगबाट बचाउनुको साथै मुटुलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ । कटुसमा एन्टीअक्सिडेन्टस् एवम् एन्टीअक्सिडेन्ट हुन्छ, जसले कोलेस्ट्रोलको स्तर कन्ट्रोल गरि मुटुलाई तन्दुरुस्त राख्दछ ।
२. ब्लडप्रेसर दुनियाँकै साझा रोग हो । आजको बद्लिदो जीवनशैलीका कारण मानिसको ब्लडप्रेसर बढीरहेको छ । आफ्नो आहारमा कटुसलाई पनि समावेश गराउँदा उच्च रक्तचाप नियन्त्रण हुन्छ । यसमा पाइने म्यागेनीसियम, पोटासियम र फाइबरको मात्रा बढी हुने गर्दछ ।
३. कटुसमा पाइने भिटामिन एवम् खनिज पदार्थले क्यान्सरजन्य समस्यामा तपाइँलाई मुक्ति दिलाउन सक्छ ! यसमा भिटामिन ई, म्यांगनिज आदि पाइन्छ ।
४. शरीरमा रगतको कमि या एनिमियाको समस्या छ भने कटुस लाभदायक हुन् सक्छ । कटुसमा आइरन, प्रोटिन एवम् पोटासियम पाइन्छ, जसले शारिरको रगतको मात्रा कम हुन् दिँदैन् ।
५. डायबेटिज अर्थात् मधुमेहको समस्या निदानको लागि कटुस फाइदाजनक छ । यसले सुगरको मात्रालाई नियन्त्रण गर्दछ !
नोट- आफ्नो आहारको बदलाव ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने डाक्टरको परामर्श अनिवार्य लिनुहोला ।
कटुस स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक छ । यद्दपी तपाइँहरुले यो जान्न जरुरि छ कि, आफ्नो आहारमा कति मात्रामा पोषक तत्व तथा खनिजको मात्रा आवश्यक रहन्छ । यसको जानकारी बीना कटुसको प्रयोग गरेको अवस्थामा तपाइको स्वास्थ्यमा असर पनि पुग्न सक्छ । अन्याथा कटुसको प्रयोग गर्दा कुनै हानी हुने छैन !